Times24 Nepal » आहा!! अलिशा शर्मा र सुनिल क्षेत्रिको दाईकी साली / भिडियो सहित
आहा!! अलिशा शर्मा र सुनिल क्षेत्रिको दाईकी साली / भिडियो सहित
अलिशा शर्मा र सुनिल क्षेत्रिको “दाईकी साली” (म्युजिक भिडियो)
गायक प्रनिश बुढाथोकीको नयाँ गित दाईकि साली म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। सुमधुर आवाजका धनि नव गायक प्रनिश बुढाथोकीको डान्सिङ बिटमा रहेको यस गीतको म्युजिक भिडियो समेत आकर्षक बनेको छ। गायक प्रनिश बुढाथोकीको स्वर तथा सिम्पल किरातीको शब्द रहेको यस गीतलाई संगीतकार अविनाश राइले संगीत भरेका छन।
छायाँकार उत्सब दाहालको छायांकन रहेको यस म्युजिक भिडियोलाइ निर्देशक अनुप चापागाईंले निर्देशन गरेका हुन् । म्युजिक भिडियोमा चर्चित मोडल अलिशा शर्मा, सुनिल क्षेत्रि तथा नव मोडल करण श्रेष्ठको नृत्य तथा अभिनय देख्न सकिन्छ ।
भिडियोलाई बिकास दाहालले सम्पादन गरेका छन् भने त्रिशा बुढाथोकीले निर्माण गरेकी छिन। निर्देशक अनुप चापागाईंले गीतको भावलाई भिडियोमा कुशलतापूर्वक कलात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन। उक्त भिडियोलाइ म्युजिक आई कम्पनिले बजारमा लिएर आएको हो।
पुरुष किन कम रुन्छन, यस्ता रहेछन कारणहरु
हामीले देखेको तर पूर्ण रुपमा बुझ्न नसकेको एउटा रहस्य हो, पुरुष कम रुने कारण। दुःख, आवेग, पश्चाताप, खुशी, प्राप्ती तथा गुमाउँदाका क्षणमा सबैको आँसु आउने गर्छ। तर पुरुष महिलाको तुलनमा निकै कम रुन्छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
यस विषयमा लण्डनका प्रिन्स ह्यारीले दुई वर्षअघि एउटा डकुमेन्ट्रीमा उल्लेख गरेकी छन्। उनको अनुसन्धान अनुसार महिला प्रतिवर्ष कम्तिमा ३० देखि ६४ पटक रुन्छन तर, पुरुष ६ देखि १७ पटक मात्र रुने गर्छन्। मनोविज्ञ जर्जिया रायले पुरुष कम रुनुको पछाडि धेरै बलियो सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष जिम्मेबार गरेको बताएकी छन।
पुरुष महिलाभन्दा कम रुनुको पछाडि प्राकृतिक र कृत्रिम दुबै कारण जोडिएका छन उनले भनेकी छन पुरुषको संवेग आउने प्रोल्याक्टिन हर्मोन महिलाको भन्दा अत्यन्त कम हुन्छ। त्यस कारण यो शरीरको हर्मोनसँग सम्बन्धित छ। यसमा सांस्कृतिक कारण पनि छ। समाजले एकतर्फी रुपमा पुरुषबाट राख्ने अपेक्षाले पुरुषको संवेगात्मक आँसुलाई निरुन्ताहित गर्छ।